Nhau - Chinese simbi musika kupora kunoenderera
Chinese simbi musika kudzoreredza kunoenderera, pakati pehondo dzepasirese
Chirwere checoronavirus chakakanganisa misika yesimbi nehupfumi kutenderera pasirese, mukati memwedzi mitanhatu yekutanga ya2020. Hupfumi hweChina hwakanga huri hwekutanga kutambura nemhedzisiro yeCovid-19-inosanganisirwa nekuvhara. Kugadzirwa kwemaindasitiri munyika kwakadzikira, muna Kukadzi wegore rino. Nekudaro, kupora nekukurumidza kwakanyorwa kubva muna Kubvumbi.
Kuvharwa kwezvikwata zvekugadzira, muChina, kwakakonzera kuti zvinhu zvitengeswe zvichinzwika kumakondinendi ese, munzvimbo dzakawanda dzinodya simbi. Hapana chimwezve chakanyanya kupfuura muindasitiri yemotokari, iyo yanga yatove kunetsekana kubata nemitemo mitsva yekuyedza uye kufamba kune yakasvibira, inowedzera simba-simba, mota.
Kuburitsa kune vagadziri vepasi rose vanoramba vari pasi pechirwere chepamberi, kunyangwe kurerutswa kwezvirango zvakaiswa nehurumende munyika zhinji. Kudiwa kubva muchikamu ichi kwakakosha kune vazhinji vanogadzira simbi.
Rumutsiriro mumusika wesimbi, kuChina, rwunoramba ruchiunganidza nhanho, kunyangwe kutanga kwemwaka wemvura. Kufamba kwekudzoka kunogona kupa makambani eChinese kutanga kana vatengi vepasirese vadzokera kumusika, mushure memwedzi yekugara pamba. Nekudaro, kukura kwekudiwa kwemumba, muChina, kunogona kutora yakawanda yeakawedzera goho.
Simbi inopwanya US $ 100 / t
Kukwira kwekugadzirwa kwesimbi kweChina, nguva pfupi yadarika, kwakakonzera kudhura kwesimbi inofamba pamusoro peUS $ 100 patani. Uku kuri kupa kumanikidza kwakashata pamamirimita emubhadharo kunze kweChina, uko kudiwa kunoramba kwakadzikiswa uye mitengo yesimbi isina kusimba. Zvakangodaro, kuwedzera kwemari yekushandisa kunogona kupa vagadziri kurudziro yekusundira kuburikidza neinodiwa-yakawanda simbi mutengo kukwira, mumwedzi inotevera.
Kudzoreredza mumusika weChinese kunogona kuburitsa nzira yekubuda kweye coronavirus-yakakonzera kuderera mune yesimbi chikamu Iyo yasara yepasi iri kuseri kwekakona. Kunyangwe rumutsiriro mune dzimwe nyika ruchiita serunononoka, pane zviratidzo zvakanaka zvekutora kubva mukumukira muChina.
Mitengo yesimbi ingangoramba ichinetsa, muhafu yepiri ya2020, sezvo nzira yekudzosa inotarisirwa kunge isina kuenzana. Mamiriro ezvinhu mumusika wepasi rose anogona kushatisa zvisati zvave nani. Zvakatora makore mazhinji kuti chikamu chesimbi chiwanezve ivhu rakarasika, zvichitevera dambudziko remari ra2008 / 9.
Tct Denderedzwa Yakaona Makasi, Kupisa Kwekushandisa Chishandiso Simbi Yakakungurudzwa Flat Bar, Hss M35 Denderedzwa Yakaona Makasi, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza Yesimbi, Hss M2 Denderedzwa Yakaona Makasi,